ညီလင်းသစ်: ဘာသာစကား၊ အကြားအာရုံနှင့် စုံသောအသံများ
Posted by ညီလင်းသစ် au 23.4.09
နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါရှင်။ ဘာသာစကားရဲ့ အံသြဖွယ်ကောင်းပုံကိုကျွန်မလည်းမကြာခဏတွေးမိပါတယ်။
ဘာသာစကားတစ်ခုပြောတတ်ဖို့ ရာအကြားအာရုဏ်က အဓိက ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ဗျို့ ။ ကျွန်မဆိုရင် ရှမ်းစကားကို အိမ်ကလူပြောနေတာကြားနေပေမယ့် ခုထိတစ်လုံးမှ မမှတ်မိဘူးလေ။ စိတ်၀၀င်စားမှု စိတ်အားထက်သန်မှုကလည်း ဘာသာစကားတစ်ခုခုတတ်မြောက်ဖို့ အဓိက ကျပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီစကားပြောတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှ လုံးလုံးနေလိုက်မှပဲ အလိုလိုတတ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုညီလင်းသစ်ရေးတာလေးက အသေးစိတ်လေးမို့ ကျွန်မရဲ့အတွေးတွေကိုပြည့်စုံသွားစေတယ်။
Good article. Didnt realise frequency wasabig factor in learning language before. Thot it was the numbers of vocabulary. Just like Chinese.
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးပဲ အကိုရေ။ ဗဟုသုတ အများကြီးရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်ညီမဆီမှာ ပြင်သစ်စာ သင်ဖို့ကြိုးစားဖူးတယ်။ ပြင်သစ်စကားလုံး Consonant တွေ လေ့ ကျင့်တော့ W ကို ဒူပလပ်ဗေ ဆိုလား ထွက်ရတာ မှတ်မိတယ်။ အဲဒီ အသံထွက်ရင် ပါးစပ်ဆိုင်း တီးနေတာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ရယ်နေတာနဲ့မတက်တော့ဘူး။ :D
Swiss German was part of the reason I chose not to work in Berne. It just got me kind of confused... I didn't fancy living there for5years by myself, though I suppose it'd be the quickest way to learn the language.
I was much happier when I visited Zurich because there were signs in French.
ပြောသံကို ကွဲကွဲပြားပြား နားက မကြားသေးသရွေ့တော့ ပါးစပ်ကလည်း အသံကွဲပြားအောင် ထွက်နိုင်မှ မဟုတ်သေးဘူးး) အသံကို ကွဲပြားအောင် ကြားနိုင်ရင်တောင်မှ ကွဲပြားတဲ့အသံတွေထွက်တတ်အောင် ထပ်ပြီး လေ့ကျင့်ဖို့ကလည်း လိုသေးတာပဲ
ထိုထက်ပိုသည်က ဆွစ်ဂျာမန်စကားသည် ဒိုင်ယာလက်ခ် အပြောသက်သက် ပုံစံသာရှိ၍ အရေးပုံစံ (written form) မရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ ဒီတော့ ကျောင်းတွေမှာ standard ဂျာမန်စကားကို သင်ပြီး အပြင်မှာတော့ ဆွစ်ဂျာမန်စကား ပြောကြသည်၊ ဂျာမနီမှ ဂျာမန်တစ်ယောက် ဒီကိုလာ သောအခါ သူ့ဂျာမန်စကားကို ဆွစ်ဂျာမန်တို့ နားလည်ပြီး ၄င်းတို့ပြောသည့် ဆွစ်ဂျာမန်စကားကိုမူ ထိုဂျာမန်နား မလည်နိုင်ပါ၊ ပြင်သစ်ဘာသာကတော့ အချို့နေရာတွင် လေယူလေသိမ်း အနည်းငယ်ကွဲသည်မှအပ ဆွစ်ဇာ လန်မှာ ပြောသည့်စကားနှင့် ပြင်သစ်ပြည်မှာ ပြောသည့်စကား အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ အီတာလျံစကားလည်း ဆွစ်အီတာလျံနှင့် အီတလီမှအီတာလျံ အတူတူနီးပါးပင် ဖြစ်သည်၊
You've better create Swiss Burmese.
ဘာသာစကား တစ်ခုကို တတ်မြောက်ဖို့က အရင်ဦးဆုံး အဲဒီစကားကို သင်ချင်စိတ်ရှိဖို့ လိုတာပေါ့ မယုဝရီရေ...၊ အဲဒီစကားပြောတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ နေရင်တော့ တတ်ဖို့ အမြန်ဆုံးပေါ့ဗျာ၊
ကို Andy Myint.. Of course, vocabularies are very important to be able to extend one's linguistic skill after having heard properly that language.
ကိုနေညိုရင့် ပြောမှပဲ ကျနော်လည်း ပြင်သစ်လို W စာလုံး ပြောတိုင်း မျက်စိထဲ စိန်ဗေဒါဆိုင်းဝိုင်းကြီးပဲ မြင်မြင်နေလို့ ရီနေရသေးတယ်၊ ဟုတ်တယ်ဗျ...ပြင်သစ် စကားလုံး တချို့က မြန်မာ့နားမှာ တော်တော့် ကိုထော်လော်ကန့်လန့် နိုင်တယ်၊
Mae...as you might know, most of the Bernois and Zurichois are pretty collaborative in terms of French language. They aren't reluctant to speak in French if they are capable of. However, Swiss German is somewhat uneasy to speak for learners. I totally agree with you. :)
ကို/မ ဇနိ... သိပ်သေချာတာပေါ့ဗျာ...။
Steve...well, they are already complicated with their4languages. Let me just stay away from this linguistic complex...lol.
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း ဒီရောက်စက အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဘဲ တစ်ချို့စကားလုံးတွေ နားမလည်ကြဘူး.. နည်းနည်းတောင် confidence လျော့သွားသလိုဘဲ..။ နောက်ပိုင်းမှ နည်းနည်းအဆင်ပြေလာတယ်..။ Linguistics and phonetics သင်ဖူးတယ်.. မလွယ်ဘူး..သင်ရင်းပြောရင်းနဲ့တောင် ရှုပ်ရှုပ်ကုန်တယ်.။ ဆွဇ်ဇာလန်က တော့ သွားလည်ချင်တဲ့နေရာထဲက တစ်ခုပါ... အခွင့်ကြုံရင်သွားလည်ချင်ပါတယ်..။
Good article! really like it! So have you learnt Italien? I think you speak well in Italien by now as it was2years already.
LOL.... Nope!!! I learnt it and progressed to some extent. Then, I couldn't continue forawhile and my italian is kind of stuck. :D
တခြား စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ဖတ်နိုင်အောင်လို့
www.myanmar-network.net မှာ တင်ချင်လို့
(ကို/မ) ဇာနည် ...
ဟုတ်ကဲ့..၊ စာနယ်ဇင်းတို့ ထုံးစံ မူရင်း credit နဲ့အတူ ဘယ်နေရာမှာ မဆို တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ခွင့်ပြု ပါတယ်၊ လာလည်တာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
အင်္ဂလိပ် အသံထွက် များနှင့်ယဉ်ပါး ခဲ့သော ကျနော်၏လျှာကြွက်သားများက ခပ်လေးလေး ပြင်သစ်အသံတို့ကြားမှာ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေခဲ့ရ သည်၊ ခက်ခဲသော သဒ္ဒါစနစ်၊ များမြောင်လှသော ချွင်းချက်များ၊ ခန့်မှန်းရခက်သော အသံထွက်များ၊ အရာရာ တိုင်းကို အထီးအမ ခွဲခြားထားသော Gender စနစ်တို့ကြောင့် လှော်တိုင်းမရောက်သော ပြင်သစ် ပင်လယ်မှာ ကျနော်အတော်စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် ရွက်စုံလွှင့်ခဲ့ရသည်၊
တကယ်ပါပဲ.... ပြင်သစ်စကားသင်ရတာ ခက်ပုံကတော့ လက်လန်တယ်ဗျာ....... :)